नेपाली सेनालाई थापिएको रुसी हेलिकोप्टरको पासो, के हो घटना ? — Imandarmedia.com
नेपाली सेनालाई थापिएको रुसी हेलिकोप्टरको पासो, के हो घटना ?
काठमाडौ। यतिबेला फेरि नेपाली सेनालाई हेलिकोप्टर खरिद गर्ने कुराले बजार तातिएको छ। सेनाले अहिले संगठनलाई रुसी हेलिकोप्टरहरु आवश्यक छ भनेर प्रस्ताव गरेको पनि होइन। ५ बर्षअघि तत्कालीन परिवेशमा गरिएको प्रस्तावको फाइल अहिले खोतलेर सेनालाई पैसा निकाशा दिन खोजिएको छ।
आसन्न चुनावको मुखमा हेलिकोप्टर खरिदको चर्चाले आम नेपालीको ध्यान तान्नु स्वभाविक हो। चुनावलाई हेलिकोप्टर, विपद-उद्धार-राहतलाई हेलिकोप्टर भन्ठान्ने सबैलाई झुक्याउने एवं धमिलो पानीमा पासो थाप्ने र ठूलो माछा समाउने यो सुनियोजित धरापको रुपमा यो प्रस्ताव अघि सारिएको रहेछ।
नेपाली सेनालाई लगातार धरापहरु थाप्ने र भड्खालोमा हाल्ने प्रयासहरु जारी छन्। रस्सियन हेलिकोप्टर खरिद अर्को एउटा महाजाल हो। सयौं तार र दूरबिनले विछ्याएको महाजालजस्तो हो यो। वास्तवमा यो पुरानो धराप हो। कसरी पूर्व दुई प्रधानसेनापति यो धरापमा पर्नुभएन र जोगिनु भयो त्यो उहाँहरुले जान्ने कुरा भयो।
तर त्यही छिप्पिएको र सिकार समाउन नसकेको धरापलाई पुनः थापिएको छ। पुरानो संगठन र नयाँ संगठन प्रमुख दुबैलाई परीक्षण गर्नको लागि। र, मौका मिले दुबैलाई एउटै खाल्डोमा हाल्नका लागि।बेमौसमको बाजा: मुलुक आर्थिक संकटको भुमरीमा परेको छ। बाह्य हस्तक्षेपमात्र होइन आक्रमणको निशाना बनेको छ।
ब्यासक्षेत्र दिनदहाडै हेपेर पेलेर हडप्ने काम भएको छ। मुलुकलाई श्रीलंकाको रोडम्यापमा राखिएको छ। यही बेला हेलिकोप्टर खरिदको समाचारले बजार तताएको छ। त्यो पनि रस्सियन हेलिकोप्टर। जब कि रुसलाई बिश्वले एक्लाएको छ।
दैनिक उपभोग्य बस्तु ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थमा समेत निर्यात रोक लगाइएको छ। न खरिद प्रक्रिया सजिलो छ न त ढुवानी प्रक्रिया। तर यहाँ “चोरको हजार दाउ” भने झैं रस्सियन ईक्विपमेण्टलाई अन्य युरोपियन मुलुक, नभए खाडी मुलुकबाट जबरजस्त ल्याउने बिकल्प अघि सारिएको छ।
बिश्वले नाकाबन्दी लादेको देशबाट हेलिकोप्टर खरिद गर्दा दुनियाले के भन्ला? लोकलाज के ले छोप्नु? शान्तिको समयमा खरिद र आपूर्ति प्रक्रिया जटिल भएको नजिर बनाएको बासी कुरा युद्धग्रस्त मुलुकबाट असामान्य अवस्थामा खरिद गर्ने कुरा कति बुद्धिमानी, ब्यवहारिक र हितकर होला?
यो सम्बेदनशील स्वार्थप्रेरित ब्यापारबाट भोलि नेपाल तिरस्कार र बहिस्कृत भयो भने के गर्ने? बिषयबस्तुको बहुआयामिक गाम्भीर्यता र संबेदनशीलतालाई मनन र आत्मसात गर्न अपरिहार्य भएको छ।
जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र तथा आस्थाको धरोहर आफ्नो मातृ संगठन कतै यो महाधरापमा नपरोस भन्ने पंक्तिकारको शुभेच्छा हो। जुन लामो समयदेखि स्ट्रयाटेजिक पार्टनर बनाएर सहकार्य गर्दै आएको मित्रदेश अमेरिका समेतलाई चिढाउने कुरा हुने छ।
संगठनको सावधानी र सतर्कता भएन अथवा कच्चा बचपन निर्णय भयो भने मुलुक झन् संकटको भुमरिमा धकेलिने छ। यो रस्सियन हेलिकोप्टर खरिदको समय हुँदैहोइन। अनावस्यक र वहियात सवै सरकारी आदेशको तामेली गर्नुहुदैन राष्ट्रिय सेनाले।
सेना किन सावधान हुने ? ५ बर्ष अगाडिदेखि थाति रहेको, राष्ट्र बैंकले रोक्का लगाएको, जालसाझीको यो पुरानो पोको चुनावको मुखमा किन खोलियो? रहस्य बुझ्ने काम होस्। एजेण्ट उही, चोर बाटो उही, प्रक्रिया उस्तै जटिल र आपूर्ति कठिनको काम यो अस्वभाविक र असामान्य अवस्थामा किन फच्चे गर्न खोजिँदै छ ?
निर्वाचन खर्चका नाममा कमिसन लुड्याउन। संगठनलाई भ्रष्टाचार ट्याग लगाएर बदनाम गर्न। अर्थ मन्त्रालयको भाँडभैलाे संकट र आलोचनाबाट ध्यान र आलोचना सेनातर्फ मोड्न र मुलुकलाई झन् संकटग्रस्त बनाउन। यो राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित बेमौसमको बाजा पारदर्शी हुनै सक्दैन र यो महाजाल सरासर नेपाली सेना फसाउन र भसाउन परिलक्षित छ।
यो मात्र होइन, आजसम्म नआएको र कसैले आँट नगरेको “चुनाव आयो सहयोग चाहियो” भन्ने प्रस्ताव आउने छ नेपाली सेनालाई। कथित् गठबन्धनले सेनामा राजनीति छिराउने र बिटुलो पार्ने बिभिन्न जाल फ्याँकिसकेका छन्। जाल छल्न सकेन भने बिपक्षी पनि के कम, चुनावी खर्च पाउँ भन्ने छ। यो संगठनलाई नयाँ चुनौती हो। घातक महाजाल। संगठन चनाखो र सावधान हुनै पर्दछ।
पासो माथि पासो: पंक्तिकारले पूर्व संगठन प्रमुखहरुको ध्यानकर्षण गरेको थिएँ। कानमा तेल हालेर बसेपछि त्यसलाई शीघ्र लिपिबद्ध गरि लेख मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ-“फाष्टट्रयाक सडक नेपाली सेनाको ब्याबशायिकता, ईमान्दारिता र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बिश्वसनीयता मार्ने हाम्रो बिरुद्ध थापेको प्रायोजित एम्बुस हो।
अर्को फाष्ट ट्रयाक बढुवा प्रणाली संगठन भत्काउने सुनियोजित मन्द बिष हो। कोभिड-१९ नियन्त्रणका नाममा सेनालाई औषधी खरिदको जिम्मा अर्को खतरनाक पासो हो”मैले देखेको एम्बुस मध्ये औषधि खरिदको धरापबाट धन्य संगठन समयमै सचेत भई बाहिर निस्कन सफल भयो। चोखियो ।
बाँकी २ गलपासोले संगठनलाई फसाउदै लगेको छ। बिराट संगठनलाई ऐंठन भइरहेको छ। नवनियुक्त प्रधानसेनापतिले अतिरिक्त साबधानी, सतर्कता र त्याग गरेर यी सुनियोजिन पासोहरुबाट संगठनलाई संकटमोचन र उद्धार गर्नुपर्ने छ। अन्यथा, इतिहासले सराप्ने छ।
एकपछि अर्को पासोमा फस्दै जाने हो भने संगठन कमजोर हुने छ र बिश्वसनीयता गुमाउने छ। संगठनको पुरसंरचना अर्को आफैले थापेको जग हँसाउने एम्बुस भएको छ। यो एम्बुसबाट वर्तमान प्रधानसेनापतिले संगठनलाई छिटो बाहिर निकाल्नुपर्ने छ। हिजो आफैंले हतारिएर र लतारिएर गरेको गल्ती किन नहोस्।
अन्त्यमा, नेपाली सेना आजपनि एकमात्र अराजनीतिक, ब्यावशायिक र तुलनात्मकरुपमा पारदर्शी संस्था हो। नेपाली जनताको साझा सम्पति र गौरव हो। आम जनतालाई यो संस्थाको गहिरो माया र बिश्वास छ।गएको बिनासकारी महाभुकम्प र कोभिड–१९ महामारीमा देखाएको सैनिक त्यागले सेना-नागरिक सम्बन्धको मायाको गाँठो झन् बलियो कस्सिएको छ।
यो बिश्वास र आस्थामा चोट पुर्‍याउने काम नहोस भनेर सेना सावधान हुनुपर्दछ। पुरानो एम्बुसबाट सुरक्षित निस्कने र नया एम्बुसमा नपर्ने उसको साबधानी सर्वाधिक अपेक्षित छ। राष्ट्रिय नेतृत्वको खडेरीमा सैनिक नेतृत्वको चट्टानी अडानको अपेक्षा राखिएको हुन्छ।
तसर्थ, रस्सियन हेलिकोप्टर खरिदको गोलमटोल जाली प्रस्ताबलाई रद्द गरेर बाँकी एम्बुसबाट बाहिर निस्किने काममा एकचित्त होस् हाम्रो सैनिक संगठन। तबमात्र मातृभूमिको भविष्य उज्वल हुन सक्दछ। लेखक सुरक्षाविद् एवं स्वर्गको सेवा पुस्तकका लेखक हुन्।